Ukukhula kweGlyphosate 'Revolution' - Abathengi Bafuna Izimpendulo - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Posted on Kwangathi 25, 2016 by UCarey Gillam
Bayibiza ngokuthi “inguquko” ye-glyphosate. Abathengi emhlabeni jikelele bavuka eqinisweni lokuthi baphila ezweni eligcwele isibulala-zinambuzane sokubulala ukhula esaziwa nge-glyphosate. Futhi abayithandi nakancane.
Eminyakeni eminingana edlule, ososayensi abathile bebelokhu bexwayisa ukuthi izethembiso ezinde zokuphepha kwezemvelo nezempilo ezihlotshaniswa ne-glyphosate, isithako esiyinhloko se-Roundup esinegama likaMonsanto, kungenzeka zingabi njengensimbi njengoba kugcizelelwe. Ukutholwa konyaka odlule ngochwepheshe bezocwaningo ngomdlavuza beWorld Health Organisation ukuthi i-glyphosate “mhlawumbe” iyisifo somdlavuza womuntu osuse umlilo ovutha kakhulu osukwini. Abathengi e-United States, e-Europe nakwezinye izindawo manje bafuna ukuthi abalawuli basukume bavimbe noma bavimbele i-glyphosate herbicides - esetshenziswa kakhulu emhlabeni - ukuvikela impilo yabantu kanye nemvelo.
Ilayisensi yamanje yakwaGlyphosate yokusetshenziswa e-EU iphela ngoJuni, kanti I-European Union isanda kubambezeleka ukuthatha isinqumo sokwelula ukubhaliswa ngenxa yengxabano.
The I-US Environmental Protection Agency nayo ibhalwe ngendlela efanayo. Ngenyanga edlule isicelo esasayinwa yizinkulungwane zabantu baseMelika sethulwa ku-EPA sifuna ukuthi kuhoxiswe i-glyphosate e-United States. Iqembu lososayensi nezishoshovu zase-US linomhlangano ohleliwe ne-EPA ngoJuni 14 ukuzama ukukholisa abezomthetho ukuthi badinga ukukhawulela noma ukuvimbela i-glyphosate. I-ejensi izama ukuqeda ukuhlolwa kwengozi entsha osekudonse isikhathi eside ngaleli khemikhali.
Kungezwe uphethiloli omningi emlilweni kuleli sonto lapho umfelandawonye wososayensi nezishoshovu besebenza kulokho abakubiza ngokuthi “Iphrojekthi Ye-Detox”Umemezele ukuthi ukuhlolwa elabhorethri yase-University of California San Francisco kuveze i-glyphosate emchameni wamaphesenti angama-93 weqembu lesampula labantu abayi-131. Leli qembu lithe lisebenzisa indlela eyaziwa njenge-liquid chromatography-mass spectrometry noma i-LC / MS / MS, ukuhlaziya amasampula omchamo namanzi. (Iqembu lathi alitholanga izinsalela ze-glyphosate emanzini ompompi.) Eminye imininingwane evela kulolu cwaningo lokuqapha umphakathi izokhishwa ngokuhamba kwesikhathi ngo-2016, ngokusho kweqembu elibhekele ukuhlolwa.
Ekuhlolweni komchamo, i-glyphosate itholwe ezingeni elijwayelekile lezingxenye ezingama-3.096 ngezigidigidi (PPB) nezingane ezinamazinga aphakeme kakhulu ane-3.586 PPB, ngokusho kukaHenry Rowlands, umqondisi weDetox Project.
Amaqembu azimele asevele evivinya ukudla kwezinsalela ze-glyphosate ngokungabikho kokuhlolwa yi-Food and Drug Administration (FDA), futhi asethole izinsalela emikhiqizweni ehlukahlukene emashalofini ezitolo zokudla. IGlyphosate isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izitshalo eziningi zokudla, ikakhulukazi izitshalo ze-biotech ezenziwe ngofuzo ukubekezelela ukufafazwa ngqo nge-glyphosate. I-FDA ithe ngoFebhuwari ii-t ingaqala ukuhlolwa okukhawulelwe kokusalela kokudla, kepha inikeze imininingwane embalwa.
UMichael Antoniou, isazi sezakhi zofuzo esivela eLondon ebesifunda iminyaka ukukhathazeka nge-glyphosate futhi sisekela iDetox Project, uthe kudingeka ukuhlolwa okwengeziwe. “Ngobufakazi obukhulayo obuvela ezifundweni zaselabhoratri obukhombisa ukuthi i-glyphosate-based herbicides ingaholela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezifo ezingamahlalakhona ngokusebenzisa izindlela eziningi, kuye kwadingeka ukuba kutholakale amazinga e-glyphosate ekudleni nasezingxenyeni ezinkulu zabantu ngangokunokwenzeka , ”Esho esitatimendeni.
Iphrojekthi ye-Detox iyazikhokhisa njengenkundla yabathengi yokuletha uketshezi lwabo lomzimba ukuze luhlolwe. Ukuhlolwa komchamo kwakuthunyelwe yi-Organic Consumers Association, futhi enye yezinhloso ukuqoqa ucwaningo ukuze kutholakale ukuthi ukudla ukudla okune-organic kunomthelela yini ezingeni lamakhemikhali okwenziwa emizimbeni yabantu.
Ekuqaleni kukaMeyi imiphumela yokuhlolwa kwamasampuli womchamo avela kumalungu ePhalamende laseYurophu akhombise ne-glyphosate ezinhlelweni zawo.
IMonsanto kanye nososayensi abahamba phambili bezolimo bathi i-glyphosate iphakathi kwezibulala-zinambuzane eziphephe kakhulu emakethe, futhi ibalulekile ekukhiqizweni kokudla okuqinile. Bakhomba emashumini eminyaka wezifundo zokuphepha nokugunyazwa kwemithetho emhlabeni jikelele. Bathi noma izinsalela ze-glyphosate zisekudleni, emanzini naseziketsheni zomzimba, azilimazi.
Ukusekelwa kwaleyo mpikiswano kuvele ngesonto eledlule kuphaneli lososayensi beZizwe Ezihlangene abamemezele ukuthi ukubukezwa ngokuphelele kwemibhalo yesayensi kwenza kwacaca ukuthi i-glyphosate mhlawumbe hhayi i-carcinogenic kubantu. Kepha okutholakele bekungukuthi ngokushesha i-pilloried njengengcolisiwe ngoba usihlalo wesigungu, U-Alan Boobis, futhi usiza ukuqhuba i-International Life Science Institute (ILSI), ethole okungaphezulu kwe- $ 500,000 kusuka eMonsanto kanye neminye iminikelo emikhulu evela kuzintshisekelo ezengeziwe zezolimo.
Isiphithiphithi ngenxa yeglyphosate asibonisi phawu lokwehlisa. Ngenyanga ezayo, iqembu labathengi Omama Ngaphesheya kweMelika wethula i- "National Toxin Free Town Tour" ukunqamula izwe lonke ukukhuthaza ukubuyiswa kwe-glyphosate namanye amakhemikhali abonakala eyingozi.
Ngokuqinisekile, i-glyphosate, esetshenziswa emikhiqizweni eyikhulu yamakhemikhali emhlabeni wonke, ingenye yamakhemikhali amaningi asabalele ezweni lanamuhla. Kubukeka sengathi yonke indawo lapho sijika khona, amakhemikhali akhathazayo atholakala lapho sitholakala khona nokudla, emanzini ethu, emoyeni wethu, nasemhlabeni wethu. Ukuqwashiswa kwabathengi okuphezulu nge-glyphosate kuza njengoba abathengi beya ngokuya befuna ulwazi oluthe xaxa nokulawulwa okuqinile ezicini eziningi zokuthi ukudla kwabo kukhiqizwa kanjani.
Labo abangaphansi kweProjekthi ye-Detox bane-ajenda, njengoba kwenza amaqembu amaningi efuna imikhawulo yokulawula, nalabo abasekela ukuqhubeka nokusetshenziswa kwe-glyphosate. Kepha ukukhathazeka ngomthelela we-glyphosate empilweni yomuntu nasemvelweni akukwazi ukususwa eceleni.
Kwelinye lamakhasi ayo ewebhu, iMonsanto isebenzisa isiqubulo esithi “Kungenzeka Singabi Nazo Zonke Izimpendulo Kodwa Siyaqhubeka Sifuna.”
Amaqembu abathengi afuna ukuhlolwa okwengeziwe kanye nezilawuli ezengeziwe zokulawula ku-glyphosate nabo basho into efanayo.
Lesi sihloko ekuqaleni savela Huffington Post. Ufuna ukudla okwengeziwe komcabango? Bhalisela i- Incwajana ye-USRTK.
UCarey Gillam ungumakadebona wentatheli yeReuters futhi manje ongumqondisi wezocwaningo we-US Right to Know, okuyiqembu elicwaninga imboni yezokudla. Landela uCarey Gillam ku-Twitter: www.twitter.com/careygillam
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane U-Alan Boobis, UCarey Gillam, FDA, Ukudla, glyphosate, GMO, ILSI, I-International Life Science Institute, Monsanto, izibulala-zinambuzane